Wednesday, July 21, 2010 Tuesday, October 4, 2011 Bọọlụ Lorraine
Ndị na-ere ahịa hụrụ ma kpọọ asịrị na asọmpi asị. Ọ bụ ezie na ngwa ọrụ dị mma iji wulite mmata mara ma wepụta ndepụta nke atụmanya, ha na-agwụ ike, na-ewe oge, na ihe ịma aka inye. Ya mere mgbe Daniel Herndon nke Uhie Red Live wee chee echiche dị oke egwu maka ịlaghachi ụlọ akwụkwọ maka onye ahịa anyị Dr. Jeremy Ciano nke RevolutionEyes Enwere m obi ụtọ banyere echiche ahụ, mana nchegbu banyere igbu ahụ.
Asọmpi a dị mfe:
Ndị nne na nna nyefere foto ụmụ ha yi ugogbe anya anwụ
Mgbe ahụ ha na-eme ka ndị enyi ha na ndị ezinụlọ ha ịtụ vootu.
Nwatakịrị ahụ nwere ọtụtụ ntuli aka na-enweta mmeri helikopta, tiketi egwuregwu Ice na ịnyagharị na igwe zamboni, yana njem nlegharị nke zoo.
Ebumnuche n'azụ asọmpi ahụ, ọ bụghị nke dị mfe:
Chịkọta onyogho anyị nwere ike iji wuo mmata banyere omume pediatric
Mee ndi ozo maka facebook peeji
Anakọta adreesị email
Ndị nlekọta ahụ na-amaja. Mana nke a bụ afọ nke ịntanetị na iPhone, ma enwere "App" maka nke ahụ. Na nke a ngwa bụ Wildfire. Ihe na-amasị m Banyere iji Wildfire:
Ọ dịtụ mfe ịrụ mkpọsa ahụ. (Dabere na oge ị chọrọ iji na ndịna-emeputa na ị nwere ike ịbụ na-erughị otu awa)
Anyị nwere nhọrọ: Sweepstakes, Kupọns, foto na asọmpi edemede
Ntinye ngwa ngwa n'ime ibe ofufe.
Achọghị Facebook -Wildfire na-enyekwa wijetị maka weebụsaịtị yana microsite ị nwere ike iduzi ndị na-asọ mpi.
Ọdịdị nke onye ọrụ dị mfe na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịkpọ ndị enyi ha ma gbasaa asọmpi ahụ.
Ọnụahịa ahụ dị mma. Dabere n'ogologo mkpọsa ahụ, na ọnụọgụ ịhazi nke ị chọrọ, mmefu ego nchịkwa gị ga-abụ ụzọ pere mpe nke ihe ọ na-efu iji mee mmemme dị ka nke a. (Dr. Ciano mmefu ego nọrọ ihe dị ka $ 200 maka mmemme izu isii a)
Ihe m na-achọghị banyere Wildfire: (Na-eche ya ihu, ọ dịghị ihe zuru oke)
Naanị otu nrubeisi na kọmputa - Aghọtara m ihe kpatara ya, mana nke a na-egbochi anyị ịbanye ndị mmadụ ka ha na-abịa n'ọfịs Dr. Ciano. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike inye ncheta, ọ bụghị mmadụ niile ga-ala n'ụlọ wee mee ya. (mgbe m dechara post a, anyị chọtara ụzọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ ntinye aka dịkwuo elu, yabụ otu obere ihe ị ga-achọ)
Anyị nwere ike ijide ozi ịntanetị nke onye ọ bụla nyefere, ma ọ bụghị onye ọ bụla nke ịtụ vootu. Ezigbo uru nke mkpọsa a na-agbasa ndepụta nzipu ozi. Ya mere, anyị chọrọ ndị nne na nna na ndị enyi ha niile na ndị ezinụlọ ha. Iji mezuo nke a, anyị ga-agbanwe gaa Mpempe akwụkwọ maka ịtụ vootu
N'okpuru ala… Enwere m obi ụtọ banyere Wildfire, a ga-anwale ọtụtụ ọdịiche maka ndị ahịa na ọnwa ndị na-abịanụ. Gụnyere nke anyị: Biz Kaadị Mmezi You jirila Ọkụ anụ ọhịa? Ahụmahụ ndị ị nwerela ngwaahịa a?
Echefukwala - tinye nwa gi ma obu nwa nwa gi iji merie na-aga helikọpta, igwe zamboni na ndị ọzọ!
Tags: video mgbasa ozi